Iraka: Lahatsarin’ny Orampanala Tany Baghdad · Global Voices teny Malagasy
Iraka: Lahatsarin'ny Orampanala Tany Baghdad
Voadika ny 21 Jona 2017 8:51 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, عربي, 日本語, English
(Marihina fa tamin'ny 14 Janoary 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Sambany teo amin'ny fahavelomany ny vahoaka tao Bagdad, Iraka no niaina mivantana ny zavatra tsy mbola fahitan'ny ankamaroan'izy ireo fa nahare momba izany fotsiny na nahita izany tamin'ny alàlan'ny sarimihetsika: latsaka nandritra ny ora maromaro ny orampanala tao an-tanàndehiben'izy ireo.
Tamin'ny 11 Janoary, maro ny olona no nanararaotra naka ny fakantsariny ary naka sary ity zava-nitranga ity : nilaza izany ho angano famantarana ny fotoana hoavy ny sasany, ny sasany indray nitsikera izany ho fiovaovan'ny toetrandro ary ny hafa kosa sambany nankafy izany teo amin'ny androm-piainany. Azonao atao ny mamaky ny ‘hevitry ny bilaogera sasany tao amin'ny fantina nosoratan'i Salam Adil, Iraka: Ny Orampanala tao Baghdad.
Tao amin'ny tranonkala fitrohana lahatsary, ilay mpisera YouTube SpliceandDice no iray tamin'ireo olona nitsikera izany ho fiovaovan'ny toetrandro, ary nampiseho sary maromaro ahitana olona mifamoivoy sy ny fifamoivoizana tao anatin'ny orampanala maivana izy tao anatin'ny lahatsariny maharitra 1mn 51s .
Nandefa ny lahatsarin'ny firotsahan'ny orampanala maivana faharoa izay maharitra 1:20 i Aliii313. Nanoratra izy tao anatin'ny famaritan'ity lahatsary ity hoe:
this is 1st time in history a light snow fall in baghdad wow, in Jan,11 2008 at 7:00 am…this vedio recorded by mohamed tarik(my brother) in our house garden in ZAYONA-BAGHDAD..ah and the actror was yahia tarik(walk in Boulevard).
Oay, sambany teo amin'ny tantara izao no nilatsaka ny orampanala maivana tao Bagdad tamin'ny 11 Janoary 2008 tamin'ny 7 ora maraina … ity lahatsary nalain'i Mohamed Tarik ity (rahalahiko) teo an-jaridainan'ny tranonay tao ZAYONA-BAGHDAD..ah ary i Yahia Tarik no mpilalao (fitsangatsanganana eny amin'ny Boulevard).
Manana lahatsary fohin'ny orampanala nilatsaka 3 samihafa ihany koa ny mpisera YouTube iray hafa, hq9sctgd. Ity manaraka ity ny iray tamin'izany :
Ho ahy , azoko antoka fa somary hafahafa ny mahita ny bohabohan'orampanala ety anoloana ao amin'ny sary ary ny hazo satrana any aoriana, araka ny hita ao amin'ny lahatsary YSDallali faharoa maharitra 49 segondra.
Ho hitanao ao amin'ny fantson'ny mpisera aowsalmsafir ny lahatsary fohy maro hafa ahitana ny hazo satrana tao Baghdad nilatsahan'ny bohabohan'orampanala. Nandefa votoaty avy amin'ny Fox News i Tigernip, izay nahitana ny mpanolotra vaovao nitatitra fa nisy fiantraikany lehibe ny orampanala : tsy nisy ny tatitra mikasika ny herisetra nandritra ny maraina sy ny fiandohan'ny tolakandro, satria niara-nankafy ny fampisehoana ny tanàndehibe iray manontolo. Azonao jerena ato ny lahatsary.
Nampiasaina araka ny Lisansa Creative Commons ny sarin'ny bohabohan'orampanala nalain'i CaptPiper .
24 ora izayTiorkia